# Messages for Burmese (မြန်မာဘာသာ)
# Author: Erikoo
guten:license_text=See also: [Alphabetical list of authors], [List of bookshelves]. Copyright for most of these books has expired in the United States. (They may still be copyrighted in other countries). So anybody may make verbatim or non-verbatim copies of those works. For details, see: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
type_a_word=ရှာဖွေလိုသော စကားလုံး/စာကြောင်း ရိုက်ပါ
guten:type_a_word=စာအုပ်/စာရေးသူ အမည် ရိုက်ထည့်ပါ
no_results=မည်သည့် စကားလုံးမျှ ရှာမတွေ့ပါ
protection=အချို့သော စာများ သည်ကလေးများ နှင့်သင့်တော် မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စကားဝှက်သတ်မှတ်ထားပါ။
guten:protection=အချို့စာအုပ်များသည် ကလေးများနှင့်သင့်လျှော် မည်မဟုတ်ပါ။ စကားဝှက်သတ်မှတ်ထားပါ။
restricted=ဤရေးသွင်းချက်သည် ကလေးများနှင့်မသင့်လျှော်ပါ။ စကားဝှက်သတ်မှတ်ပါ။
set_filter=ကာကွယ်မှုအား ဖွင့်ထားသောကြောင့် ကန့်သတ်ထားသည်များတွင် စကားဝှက်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
filter_options=ကာကွယ် မှုများအား ရွေးချယ်ရန်
enter_new_password=စကားဝှက် အသစ် ရိုက်ပါ